OED COVID-19 | Hubi sheegashadeyda
Si aad u hubisid sheegashadaada, gal Nidaamkeena Sheegashada Onleenka ah. Sheegashooyinka waxaa la cusbooneysiiyaa inta lagu jiro habeenka oo waxaa guud ahaan la heli karaa subixii.
Su’aalaha inta badan la is weydiiyo ee ku saabsan sheegashooyinka, qaanuunada sheegashooyinka, iyo waxa aad sameyn kartid.
Hadeer, waqtiga u dhaxeeyo codsashada iyo helida baaritaankaaga ugu horeeyo waa ugu badnaan afar isbuuc. Caadi ahaan, dowlada faderaalka waxay tixgelisaa sadex isbuuc “oo waqtigeeda ah.” Waxay nagu qaadaneysaa waqti dheer sabab la xiriirto COVID-19. Dad badan ayaa codsanayo faa’idooyinka shaqo la’aanta badelkii weligeed ka hor.
Waxay nagu qaadatay afar isbuuc oo looga baaran dago sheego fudud. Haddii aadan ku helin jeegaaga afar isbuuc kadib, waxaad badanaa haysataa sheegasho adag.
Halkaan waa sababaha qaar ee caadiga ah oo waqtiga sugitaanka oo ka dheer afar isbuucyo:
Waxaa ku dhaafay isbuuc (ama ka badan) oo buuxinta sheegashadaada isbuuclaha. Tani waa sababta ugu caadisan oo daahitaanka faa’idooyin helida ah. Waa inaad xareysaa sheegashada isbuuclaha isbuuc walba haddii aad rabtid inaad sii joogteysid inaad faa’idooyin heshid. Haddii ay ku dhaafto isbuuc, waa inaad aadaa Nidaamkeena Sheegashada Onleenka oo dib u bilowdid sheegashadaada.
Maadan soo wargelin daqliyadaada oo sheegashadaada isbuuclaha ah.
Waxaad daqli ka heshay milatariga, dopwlada faderaalka, ama laga helay gobol kale. Waxay nagu qaadataa waqti inaan dib uga maqalno nidaamyadooda.
Dacwadaada waxay u baahantahay dabagal dheeraad ah. Taqasusyada sheegashooyinkeena waa inay kula hadlaan, badroonigaaga, iyo/dadka kale sababtoo ah:
Kuuma suurtogaleyso inaad shaqeysid
Si firfircoon uma raadineysid shaqo
Waa lagu ceyriyay
Waxaad leedahay noocyo gaar ah oo daqli ah waxaan u baahannahay inaan xaqiiq gelino (liiska 1-3 tusaalooyinka)
○ [Sheegashooyinka UI ee lagu qorayo sababaha inta kale]
Waxaa laguu balamiyay inaad ku soo laabataid shaqada. Tani waxay si toos ah u joojisaa sheegashadaada sababtoo ah waxaan u maleynay inaad ka shaqeyneysid oo aadan u baahneyn faa’idooyin markale. Waxaad u baahantahay inaad nasoo ogeysiisid haddii aadan ku soo laaban shaqada iyo sababta. Ama haddii aad sameysay, waxa daqliyadaada ay ahaayeen.